Nyaya Yeupenyu: Takadzidza Kubvuma Zvese Zvatinonzi naJehovha Tiite | Kathleen Logan
Nharireyomurindi—Yekudzidza | January 2021
SARUDZA MUTAURO Abua Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur Amharic Amis Arabic Armenian Armenian (West) Assamese Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiChangana (Mozambique) ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiMin Nan (ChekuTaiwan) ChiPhimbi ChiRomani (ChechiVlax, Russia) ChiSutu (Lesotho) ChiSutu (South Africa) ChiTamil (Chinonyorwa Nearufabheti Yedu) ChiTetun Dili Chichewa Chiga Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chirungu (Liberia) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Drehu Dutch Edo Efik Esan Estonian Ewe Fante Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Gitonga Gokana Greek Greenlandic Guadeloupean Creole Guarani Guianese Creole Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Havu Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Icelandic Idoma Igbo Igede Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kachin Kamba Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Kekchi Khana Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kituba Kongo Konkani (Roman) Korean Krio Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Laotian Lari Latvian Lendu Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Makhuwa-Meetto Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Marshallese Mashi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mixe (North Central) Mixtec (Guerrero) Mizo Mongolian Moore Motu Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuChile Mutauro Wemasaini wokuColombia Mutauro Wemasaini wokuEcuador Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Mutauro Wemasaini wokuNigeria Mutauro Wemasaini wokuPoland Mutauro Wemasaini wokuRussia Mutauro Wemasaini wokuSouth Africa Mutauro Wemasaini wokuVenezuela Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nicobarese Niuean Norwegian Nsenga (Zambia) Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Palauan Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Romania) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Samoan Sangir Sango Saramaccan Sena Sepedi Sepulana Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Songomeno Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Taabwa Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tewe Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Tuvinian Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Arabic) Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yapese Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Takadzidza Kubvuma Zvese Zvatinonzi naJehovha Tiite
YAKATAURWA NAKATHLEEN LOGAN
PASHURE pekunge kwanaya zvakasimba, rwizi rwakazara nemvura yakasviba iyo yaimhanya zvekuti yaikungurutsa matombo akakura. Taifanira kuyambuka, asi mvura yacho yakanga yakukura bhiriji. Ini nemurume wangu Harvey, pamwe chete nehama yaititurikirira mutauro wechiAmis, takatya uye takashaya kuti toita sei. Patakanga tava kuyambuka, hama dzaiva kune rimwe divi dzakanga dzakatarisa dzichitityira. Takatanga nekupinza kamota kedu murori, asi takanga tisina tambo kana cheni dzekukasunga kuti kasafamba-famba. Rori racho rakabva ratanga kufamba zvishoma nezvishoma richipinda murwizi. Takaita setakatora gore tichiyambuka uye panguva yese iyi tainyengetera nemwoyo wese kuna Jehovha kuti atibatsire kuyambuka zvakanaka. Maiva muna 1971. Taiva kuTaiwan kure chaizvo nekumusha kwedu. Regai ndikuudzei nyaya yedu.
KUDZIDZA KUDA JEHOVHA
Harvey ndiye aiva mukomana mukuru pavanakomana 4. Mhuri yavo yakadzidza chokwadi pavaigara muMidland Junction kuWestern Australia, panguva yainge yakaoma zvinhu kuma1930. Harvey akasvika pakuda Jehovha uye akabhabhatidzwa aine makore 14. Pasina nguva abhabhatidzwa, akadzidza kubvuma mabasa ese aaipiwa muungano. Paaiva mukomana mudiki akamboramba kuverenga Nharireyomurindi pamusangano achifunga kuti akanga asina kukodzera. Asi hama yaitaura naHarvey yakati, “Kana mumwe munhu akakukumbira kuti uite chimwe chinhu musangano raJehovha, anenge achifunga kuti wakakodzera kuchiita!”—2 VaK. 3:5.
Ini naamai vangu nasisi vangu takadzidza chokwadi kuEngland. Baba vangu vakazogamuchira chokwadi pava paya, asi pakutanga vakanga vasingafariri Zvapupu. Ndakabhabhatidzwa vasingadi pandaiva nemakore 9. Ndakava nechinangwa chekupayona uye kuzova mumishinari. Asi baba vaisada kuti ndipayone ndisati ndasvitsa makore 21. Ndaisada kumirira kwenguva yakareba kudaro. Saka pandakanga ndava nemakore 16, baba vakandibvumira kuti ndiende kuAustralia kunogara nasisi vangu avo vakanga vatamira ikoko. Ndakazotanga kupayona pandakanga ndava nemakore 18.
Musi watakachata muna 1951
Pandakanga ndava kuAustralia, ndakaonana naHarvey. Tese taida kushumira Jehovha semamishinari. Takachata muna 1951. Pashure pekupayona tese kwemakore maviri, takakumbirwa kuti tiite basa remudunhu. Dunhu redu rekuWestern Australia rainge rakakura chaizvo. Saka kakawanda kacho taityaira tichienda kunzvimbo dziri kure chaizvo.
Patakagirajuweta muYankee Stadium muna 1955 tapedza chikoro cheGiriyedhi
Muna 1954 takakokwa kuti tipinde kirasi yechi25 yechikoro cheGiriyedhi. Tarisiro yedu yekuva mamishinari yakanga yava kuda kuzadzika! Takasvika muNew York nengarava uye takabva tatanga kosi yekudzidza Bhaibheri zvakadzama. Kosi yedu yaisanganisira kudzidza mutauro wechiSpanish, uyo wainge wakaomera Harvey nekuti aitadza kutaura r wechiSpanish zvakanaka.
Pataiva kuGiriyedhi, varayiridzi vakazivisa kuti vaya vanoda kunoshumira kuJapan vanogona kunyoresa kuti vapinde mukirasi yekudzidza mutauro wacho. Taida kuti sangano raJehovha ritisarudzire zvekuita. Pasina nguva, Albert Schroeder, mumwe wevarayiridzi veGiriyedhi akaziva kuti takanga tisina kunyoresa mazita edu. Akatiudza kuti: “Chimbofungai zvakare nezvazvo.” Patakaramba tichizeza, Hama Schroeder vakati: “Ini nevamwe varayiridzi takunyorai mazita enyu. Edzai kudzidza chiJapanese.” Zvaiva nyore kuna Harvey kuti ataure mashoko echiJapanese pane echiSpanish.
Takasvika kuJapan muna 1955 uye munyika yacho yese maingova nevaparidzi 500. Harvey aiva nemakore 26 uye ini ndaiva ne24. Takaendeswa kuguta rainzi Kobe, iro raiva nechiteshi chengarava uye takashumira ikoko kwemakore 4. Takafara patakanzi tidzoke mubasa remudunhu uye takashumira pedyo neguta reNagoya. Taida zvese zvine chekuita nebasa redu zvinoti, hama nehanzvadzi dzedu, zvekudya uye nzvimbo dzinoyevedza. Asi pasina nguva takawanazve mukana wekubvuma kuita zvatakakumbirwa naJehovha
BASA IDZVA RINOUNZA MATAMBUDZIKO MATSVA
Ini naHarvey nemamwe mamishinari tiri muKobe, Japan muna 1957
Pashure pemakore matatu tiri mubasa rekufambira, bazi reJapan rakatibvunza kana taida kunoshandira kuTaiwan nevanhu vechiAmis. Dzimwe hama dzakanga dzichitsauka pakutenda uye kuTaiwan kwaidiwa hama inonyatsogona chiJapanese kuti ibatsire pakugadzirisa dambudziko racho. Taida basa rataiita kuJapan, saka zvakanga zvakaoma kuti tiite chisarudzo. * Asi Harvey akanga adzidza kusatomboramba basa raanenge apiwa, saka takabvuma kuenda.
Takasvika muTaiwan muna November 1962. Maiva nevaparidzi 2 271 uye vakawanda vavo vaiva verudzi rwechiAmis. Asi taifanira kutanga tadzidzira chiChinese. Taingova nebhuku rimwe chete rekushandisa pakudzidza chiChinese uye mudzidzisi aisagona Chirungu, asi takakwanisa kudzidza mutauro wacho.
Tichangosvika muTaiwan, Harvey akanzi ashumire semuranda webazi. Bazi racho raiva diki, saka Harvey aikwanisa kuita basa rake rese remuhofisi uye aikwanisawo kushanda nehama dzechiAmis kwemavhiki matatu pamwedzi. Aipota achishumirawo semutariri weruwa, achipa hurukuro mumagungano. Harvey aigona kupa hurukuro nechiJapanese uye hama dzechiAmis dzaigona kunzwisisa hurukuro dzacho. Asi hurumende yaingobvumira kuti misangano yezvitendero iitwe nechiChinese chete. Saka kunyange zvazvo Harvey akanga achiri kunetseka nemutauro wacho, aipa hurukuro dzacho muchiChinese, imwe hama ichiturikira muchiAmis.
Panguva iyoyo Taiwan yaitongwa nemasoja, saka hama dzaifanira kuwana mapemiti kuti dziite magungano. Zvakanga zvisiri nyore kuwana mapemiti uye mapurisa aiwanzononoka kuapa. Kana mapurisa asina kutipa pemiti paisvika vhiki regungano, Harvey airamba akagara muhofisi mavo kusvikira vamupa. Sezvo mapurisa ainyara nazvo kuti munhu wekune imwe nyika arambe akamirira chimwe chinhu pakamba yavo, vaibva vakurumidza kutipa pemiti.
KUKWIRA GOMO KEKUTANGA
Pataiva kuTaiwan tichiyambuka rwizi rwusina kudzika tichienda kunoparidza
Pamavhiki ataishanda nehama, taiwanzofamba kweawa kana kupfuura tichikwira makomo uye tichiyambuka nzizi. Ndinoyeuka pandakakwira gomo kekutanga. Tichingopedza kudya, takabata bhazi ra5:30 mangwanani tichienda kune imwe nharaunda iri kure. Takazofamba netsoka tichiyambuka rwizi rwakakura ndokukwira gomo rine makata asingaiti. Makata acho akanga akanyanya zvekuti tsoka dzehama yaiva pamberi pangu dzainge dzakanangana nemaziso angu.
Mangwanani iwayo Harvey akaparidza nahama dzemunzvimbo yacho, uye ini ndakaparidza ndega mune mimwe misha yaigara vanhu vaitaura chiJapanese. Pakazosvika 1:00 masikati, ndakanga ndaparara nenzara nekuti ndakanga ndava nenguva ndisati ndadya. Pandakazoonana naHarvey akanga ari ega. Akanga achinjanisa magazini nemazai matatu ehuku mambishi. Akandiratidza madyirwo anoitwa zai mbishi nekuboora kumusoro nekuzasi ndokurisveta. Kunyange zvazvo raiita serisinganaki ndakaedza rimwe chete. Asi ndiani aizodya rechitatu? Ndini ndakaridya, nekuti Harvey aifunga kuti aisazokwanisa kunditakura kana ndafenda nenzara.
MAGEZERO ANDAKANGA NDISATI NDAMBOITA
Pane rimwe gungano redunhu, ndakaita zvimwe zvinhu zvandakanga ndisati ndamboita. Taigara pamba peimwe hama pedyo neImba yeUmambo. Sezvo vaAmis vachikoshesa chaizvo kugeza muviri, mudzimai wemutariri wedunhu akatiisira mvura yekugeza. Harvey aiva nezvaaiita saka akanditi nditange kugeza. Paiva nemidziyo mitatu inoti, bhaketi remvura inotonhora, uye remvura inopisa, nedhishi risina chinhu. Ndakashamiswa kuona kuti mudzimai wemutariri wedunhu akanga azviisa panze paigona kuonekwa nehama dzaiva paImba yeUmambo dzichibatsira pakugadzirira gungano. Ndakakumbira kuti andipewo chimwe chinhu chekuvharisa kuti ndisaonekwa ndichigeza. Akandiunzira purasitiki asi raionesa. Ndakafunga kuenda kuseri kwemba asi kwaiva nemadhadha ainge akagadzirira kuchobora chero munhu aisvika pedyo nefenzi. Ndakazviudza kuti, ‘Hama idzi dzakabatikana chaizvo zvekuti hadzingambozvioni kuti ndiri kugeza. Uye kana ndikasageza dzichanetseka nazvo. Regai ndigeze!’ Saka ndakabva ndageza.
Takapfeka hembe dzinopfekwa nevaAmis pazviitiko zvinokosha
MABHUKU MUMUTAURO WECHIAMIS
Harvey akaona kuti hama dzechiAmis dzakanga dzisiri kufambira mberi mune zvekunamata nemhaka yekuti vakawanda vacho vakanga vasingagoni kuverenga uye kwakanga kusina mabhuku mumutauro wechiAmis. Sezvo mutauro wechiAmis wakanga wava kuita zvekunyorwa, zvakanga zvava nemusoro kudzidzisa hama kuti dzigone kuverenga mutauro wadzo. Iri raiva basa rakakura chaizvo asi nekufamba kwenguva, hama dzakanga dzava kukwanisa kudzidza nezvaJehovha mumutauro wadzo. Mabhuku echiAmis akatanga kuwanika munenge muna 1966 uye muna 1968 Nharireyomurindi yechiAmis yakatanga kubudiswa.
Asi hurumende yakanga isingadi kuti tiparadzire mabhuku asiri emutauro wechiChinese. Saka kuti pasava nematambudziko, Nharireyomurindi yechiAmis yaibudiswa nenzira dzakasiyana-siyana. Semuenzaniso, kwenguva yakati Nharireyomurindi yataishandisa yakanga yakanyorwa nemitauro miviri, chiMandarin nechiAmis. Izvi zvaiita kuti vaya vaida kuziva zvaiitika vafunge kuti tiri kudzidzisa vanhu chiChinese. Kubvira ipapo sangano raJehovha riri kubudisa mabhuku akawanda mumutauro wechiAmis kuti vanhu ava vanokosha vabatsirwe kudzidza chokwadi cheBhaibheri.—Mab. 10:34, 35.
Kuma1960 nekuma1970, hama dzakawanda dzechiAmis dzaisararama maererano nemitemo yaMwari. Sezvo vaisanyatsonzwisisa zvinotaurwa neBhaibheri, vamwe vaiita upombwe, vaidhakwa kana kuti vaishandisa fodya nebetel nut. Harvey akashanyira ungano dzakawanda, achiedza kubatsira hama kuti dzinzwisise maonero anoita Jehovha zvinhu izvi. Pataishanyira imwe ungano ndipo pakaitika zvandataura patangira nyaya ino.
Hama dzinozvininipisa dzakabvuma kuchinja, asi zvinosuruvarisa kuti dzakawanda hadzina. Uye nhamba yevaparidzi muTaiwan yakadzikira kubva pavanhu vaipfuura 2 450 kusvika pavaparidzi vanenge 900 mumakore 20. Izvi zvaiodza mwoyo chaizvo. Asi taiziva kuti Jehovha aisazokomborera sangano risina kuchena. (2 VaK. 7:1) Nekufamba kwenguva ungano dzakazotanga kushumira Jehovha nenzira yaanoda, uye nechikomborero chake, muTaiwan mava nevaparidzi vanopfuura 11 000.
Kubvira muna 1980 zvichienda mberi, takaona kuti ungano dzechiAmis dzakawedzera kusimba uye Harvey akanga ava kukwanisa kuva nenguva yakawanda nehama dzaitaura chiChinese. Akafara chaizvo kubatsira varume vehanzvadzi dzakawanda kuti vave Zvapupu zvaJehovha. Ndichiri kuyeuka achindiudza kufara kwaakaita pakanyengetera mumwe wevarume ava kuna Jehovha kekutanga. Neniwo ndinofara kuti ndakakwanisa kudzidzisa vanhu vakawanda kuti vaswedere pedyo naJehovha. Ndakavawo nemufaro wekushanda pabazi reTaiwan nevana vaviri vemumwe mudzimai wandakadzidza naye Bhaibheri.
Iye zvino handisisina murume wangu. Pashure pemakore anenge 59 takaroorana, mudiwa wangu Harvey akafa nekenza musi wa1 January 2010. Akanga aita makore anenge 60 ari mubasa renguva yakazara! Ndichiri kumusuwa chaizvo. Ndakafara chaizvo kushumira naye munyika mbiri dzinonakidza! Takadzidza mitauro miviri yakaoma yekuAsia, uye kana ari Harvey akatodzidzawo kuinyora.
Pashure pemakore anenge 4, Dare Rinotungamirira rakasarudza kuti ndidzokere kuAustralia pamusana pekukura kwandaita. Zvakatanga kuuya mupfungwa dzangu ndezvekuti, ‘Handidi kubva kuTaiwan.’ Asi Harvey akandidzidzisa kuti ndisamborambira sangano raJehovha, saka ndakadzokera. Ndakazoona zvakanakira chisarudzo chacho.
Ndinofara kushandisa chiJapanese nechiChinese pandinenge ndichiratidza vaenzi zvakaita paBheteri
Iye zvino ndiri kushandira pabazi reAustralasia uye pakupera kwevhiki ndinoparidza neungano. Ndinofara kushandisa chiJapanese nechiChinese pandinenge ndichiratidza vaenzi zvakaita paBheteri. Asi ndakamirira nemwoyo wese zuva richamutswa vakafa, ndichiziva kuti Harvey uyo akadzidza kusarambira Jehovha, achayeukwa naye.—Joh. 5:28, 29.
^ ndima 14 Kunyange zvazvo chiChinese chiri icho chava kunyanya kushandiswa muTaiwan, chiJapanese ndicho chaimbonyanya kushandiswa kwemakore akawanda. Saka vanhu vakawanda vemitauro yakasiyana-siyana yemuTaiwan vaitaurawo chiJapanese.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Takadzidza Kubvuma Zvese Zvatinonzi naJehovha Tiite
w21 January pp. 26-30
Ramba Wakadzikama Uye Vimba naJehovha
Zvatinodzidza ‘Pamudzidzi Aidiwa naJesu’
Boka Guru Remamwe Makwai Rinorumbidza Mwari naKristu
Rambai Muchidanana Nemwoyo Wese
NYAYA YEUPENYU Takadzidza Kubvuma Zvese Zvatinonzi naJehovha Tiite
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2021
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2021
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2021
NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA January 2021